Cirka ma kor baa mise waa? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Cirka ayaa ku jira - miyaanay ahayn?
Waxyar ka dib markaad dhimato, waxaad naftaada ku arki doontaa safka hore ee albaabka samada, halkaas oo Saint Peter ay kugu sugayso su'aalo qaar. Haddii markaa laguu arko inaad u qalanto, waa lagu galin doonaa, oo lagu qalabeysan yahay khafiif cad iyo suugaan waajib leh, waxaad ku dadaali doontaa dhanka daruuraha laguu xilsaaray. Markaad xarigga qaadatidna, waxaad garan kartaa saaxiibbadaada qaarkood (laakiin waxaa suurto gal ah inaysan u badnayn inta la rajeynayay); laakiin laga yaabee sidoo kale badan oo aad doorbiday inaad ka fogaato inta aad nooshahay. Markaa waa sida noloshaada weligeed ah ay u bilaabmayso.
Waxaa laga yaabaa inaadan si dhab ah u aaminsaneyn taas. Nasiib wanaagse, maahan inaad rumayso taas, maxaa yeelay kama mid aha runta. Laakiin sidee baad runtii qiyaaseysaa jannada? Inteena ugu badan ee Ilaahay rumeeysan waxaan rumeeysanaa nolol kastoo dhimashadeeda ka dib aan ku abaalmarino aaminaaddeena ama lagu ciqaabo dembiyadayada. Inbadan ayaa la hubaa - waa taa sababta Ciise noogu yimid; taasina waa sababta uu annaga noo dhintay, taasina waa sababta uu noogu nooshahay. Waxa loogu yeero sharciga dahabiga ah wuxuu ina xusuusinayaa: "... sidaa daraadeed Ilaah wuxuu dunida u jeclaaday inuu siiyay wiilkiisa keliya, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah" (Yooxanaa 3,16).
Laakiin maxay taasi ka dhigan tahay? Haddii mushaharka kuwa xaqa ahu ay xitaa ku dhow yihiin sawirada si fiican loo yaqaan, waa inaan si dhow u eegnaa meesha kale - waa hagaag, laga yaabee inaanan jeclayn inaan qirto.
Ka fikirka cirka
Maqaalkani waxaa loogu talagalay inuu kugu dhiirigaliyo inaad ka fikirto cirka si buuxda. Muhiimad weyn ayaan u leenahay inaadan noqon mid doqomo ah taasi waxay noqon lahayd doqon iyo isla weyni. Ilaha kaliya ee lagu kalsoonaan karo ee macluumaadku waa Kitaabka Quduuska ah, waana wax lala yaabo oo ku saabsan waxa jannada laga filaayo. Si kastaba ha noqotee, Qorniinku wuxuu noo ballan qaadayaa in aaminaada Ilaah ay ina siin doonto labadaan noloshan (dhamaan caqabadaha) iyo sidoo kale mustaqbalka mustaqbalka. Ciise ayaa taas caddeeyay. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ahaa mid aan yaraynin wada-xiriirka ku saabsan waxa uu mustaqbalka adduunku u ekaan doono (Mark 10,29: 30).
Rasuul Bawlos wuxuu qoray: "Hadda waxaan aragnaa oo keliya sawir aan caddayn sida muraayad daruuro leh ..." (1 Korintos 13,12, Good News Bible). Bawlos wuxuu ka mid ahaa dadka tirada yar ee loo dhiibo "fiisaha booqdaha" ee jannada, oo ay ku adkaatay inuu sharraxo waxa ku dhacay isaga. (2 Korintos 12,2: 4). Si kasta oo ay ahayd, waxay ahayd wax cajiib ah oo ku filan inuu isaga ka dhigo inuu dib uga fiirsado noloshiisa. Kama uusan cabsaneyn dhimashada. Wuxuu arkay wax ku filan oo ku saabsan mustaqbalka mustaqbalkiisa xitaa wuxuu ku sugayay farxad. Inteena badan, hase yeeshe, ma nihin sida Paul.
Markaan ka fikirno jannada, waxaan qiyaasi karnaa oo keliya sida heerkeenna aqooneed ee hadda jira uu oggol yahay. Tusaale ahaan, rinjiyeyaasha qarniyadii dhexe waxay sawireen sawir guud oo jannada ku saabsan, oo ay ku qaabeeyeen hannaankooda, astaamaha quruxda jirka iyo kaamil ahaan. (Qofku waa inuu isweydiiyo, xaggee uu ka yimid soo jeedinta tusitaanka, ee u eg mid bannaanka u ah, aerodynamically aad u sarreysnaan leh oo loo qorsheeyay carruurta.) Jannada maanta si aad ah uma foga haddii aan rabno inaan fikrad ka helno adduunkaas mustaqbalka.
Qorayaasha casriga ah waxay adeegsadaan sawirro casri ah. CS Lewis 'khayaali ahaan khafiif ah Furriinka weyn (Furiinka weyn) wuxuu sharaxayaa safarka baska mala-awaalka ah ee cadaabta (taas oo uu u arko inay tahay meel ballaadhan oo cidla ah) oo samada dhexaysa. Ujeedada safarkan ayaa ah in la siiyo kuwa “cadaabta” ah fursad ay ku beddelaan maskaxdooda. Lewis 'Jannada ayaa soo qaadata qaar, in kastoo kuwa badan oo dambiilayaashu aaney jeclayn ka dib marka ay la qabsadaan bilaabaan waxayna doorbidayaan cadaabta ay yaqaan. Lewis wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuusan siinin wax aragti gaar ah oo ku saabsan dabeecadda iyo dabeecadda nolosha weligeed ah; buugiisa waa saafi.
Shaqada xiisaha badan ee Mitch Alborn Shanta Qof ee Aad ku Kulmaysid Jannada (Eng. Shanta qof ee aad jannada kula kulanto) sheegasho kama muujineyso sax ahaanta fiqi ahaaneed. Isaga, cirka waxaa laga helaa baarkin madadaalo ah oo ag taal badda, halkaas oo dabeecadda ugu weyn ay ka shaqeysay noloshiisa oo dhan. Laakiin Alborn, Lewis, iyo qoraa kale oo iyaga la mid ah ayaa laga yaabaa inay aqoonsadeen halka ugu hoosaysa. Waxaa laga yaabaa in cirku uusan sidaa uga duwanayn jawiga aan ku naqaan adduunkan. Markuu Ciise ka hadlay boqortooyada Ilaah, wuxuu had iyo goor isbarbar dhiga nolosha sida aan ku ognahay sharraxaadiisa. Isuma eka isaga, laakiin waxay isaga la mid yihiin inuu soo qaadan karo isbarbar dhigyo la mid ah.
Hadana iyo hadda
Inta badan taariikhda bini aadamka waxay lahaayeen aqoon yar oo saynis ah oo ku saabsan dabeecadda cosmos. Haddii aad ka fikirtid wax sidan oo kale ah, waxaad rumeysan tahay in dhulku yahay disk uu ku hareereysan yahay qorraxda iyo dayaxa goobo wareegsan oo dhammaystiran. Cirka waxaa la rumeysan yahay inuu halkaas joogo, halka cadaabta ay ku jirtay dhulka hoostiisa. Fikradaha dhaqameed ee albaabka jannada, hargaha, dharka cad, baalasheeda malaa'igta iyo ammaanta aan dhammaadka lahayn waxay la jaan qaadayaan rajada aan ka bixinayno khubarada Kitaabka Quduuska ah ee wax weyn ka tarjumay oo Kitaabka Quduuska ahi wax ka sheegayo xagga jannada si waafaqsan fahamkooda adduunka.
Maanta waxaan heysanaa aqoon aad u badan oo ku saabsan cilmiga xiddigiska (cosmoomical). Marka waxaan ognahay inuu dhulku yahay kaliya meel yar oo aad u yar baaxadda balaaran ee muuqata sida muuqata weligeedba sii ballaaranaya. Waxaan ognahay in waxa noo muuqda inay yihiin xaqiiqo la taaban karo oo runtii ah wax aan ka aheyn shabakad tamarta sifiican looga xiiseeyo oo ay isku hayaan xoogag xoog leh oo aan inta badan taariikhda aadanaha xitaa ka shakisanayn jiritaankeeda. Waxaan ogsoonahay in laga yaabo in boqolkiiba 90% adduunka ay ka kooban tahay “arrin mugdi ah” - oo aan ku aalami karno xisaabaadka, laakiin aynaan arki karin ama aan cabbiri karin.
Waxaan ognahay in xitaa ifafaale aan la dafiri karin sida "waqti dhaaf" ay yihiin qaraabo. Xitaa cabbirrada qeexaya fikradaheena guud (Dhererka, balaca, dhumucda iyo qoto dheer) waa kaliya aragtiyo iyo aragti la fahmi karo ee xaqiiqada aad u adag. Qaar ka mid ah xiddig-yaqaannada cilmiga xiddigiska ayaa noo sheegaya in ay jiri karaan ugu yaraan toddobo cabbir oo kale, laakiin qaabka ficilku annaga noo malayn karin. Saynisyahannadani waxay ka shakisan yihiin in cabbirradaas dheeraadka ahi ay yihiin sida dhererka, dhererka, ballaca iyo waqtiga. Waxaad gaartay heer ka sarreeya xadka cabiridda qalabkayaga ugu nugul; iyo sidoo kale caqligayaga waxaan bilaabi karnaa inaan wax ka qabano iyada oo aan rajo xumo laga qabin.
Guulihii sayniska ahaa ee salka ku hayey ee tobanaankii sano ee la soo dhaafay ayaa isbeddelay xaaladda aqoonta ee aaggaga dhan. Bal jannada sidee tahay? Miyayna ahayn inaan dib uga fikirno fikradaheena ku saabsan nolosha aakhiro?
Erey xiiso leh - ka baxsan. Dhinacan kuma aha dunidan. Sow suurtagal ma aha in lagu noolaado nolosha weligeed ah bey'ad caan ah oo aan sida saxda ah u sameysanno waxaan had iyo jeer jecel nahay inaan ku qabno - dadka aan ku naqaanno jirrada aan aqoonsan nahay? Miyayna ahayn in nolosha dhimashada ka dib ay tahay waqti dheeri ah oo ah waqtiga ugu wanaagsan ee nolosheena aan ognahay oo aan lahayn culeyskiisa, cabsi iyo silica? Hagaag, markan waa inaad si taxaddar leh u akhridaa - Baybalku ballanqaadi maayo inay taasi jiri doonin. (Waxaan jeclaan lahaa inaan mar labaad ku celiyo - Kitaabka Quduuska ah ma ballanqaadi doono inaysan taasi noqon doonin).
Caalimka fiqiiga ah ee reer Mareykan Randy Alcorn wuxuu la macaamilay mowduuca cirka jannada sanado badan. Buuggiisa Jannada (Jannada) wuxuu si taxaddar leh u baarayaa oraah kasta oo ka timaadda Kitaabka Quduuska ah ee la xiriira nolosha dhimashada kadib. Natiijadu waa sawir xiiso leh oo ku saabsan waxa nolosha dhimashada ka dib ay u ekaan doonto. Wuxuu qoray:
“Waxaan ku daalay nafteena, waxaan ku daalanaa kuwa kale, dembiga, silica, dambiyada iyo dhimashada. Oo weliba waxaan jecel nahay nolosha dunidan, miyaanay ahayn? Waan jeclahay badnaanta habeenka cirka haray ee lamadegaanka. Waxaan jecelahay inaan fadhiisto si raaxo leh oo ku ag taal Nancy sariirta agtiisa meesha dabka lagu shito, buste ayaa nagu fidsan, eeyga agtiisa ah ayaa ag dhow. Waaya-aragnimooyinkaani ma saadaalin karaan jannada, laakiin waxay ku bixiyaan dhadhan waxa halkaas laga fili karo. Waxa aan ka jecelnahay noloshan adduun waa waxyaabaha ina siiya niyadda nolosheena loogu talagalay. Waxa aan halkaan ku jecelnahay adduunkan ma ahan oo keliya waxa ugu wanaagsan ee noloshan lagu bixiyo, laakiin sidoo kale waa iftiinka nolosha dambe xitaa weyn. Iyada oo ku saleysan aqoonteena sii hagaageysa ee jawigayaga, aan ka fikirno waxa nolosha jannada u ekaan karto.
Caqiidada Rasuulladu, waa markhaatiga ugu caansan ee iimaanka shaqsiyadeed ee dhex mara Masiixiyiinta, waxay ka hadashaa "sarakicidda kuwii dhintay" (macno ahaan: hilibka). Waxaa laga yaabaa inaad ku celcelisay boqolaal Malaayiin Malachi ah, laakiin weligaa miyaad ka fikirtay micnaheedu?
Caadi ahaan mid ayaa la wadaagaya sarakicidda sarakicidda jidhka "ruuxiga ah", oo jilicsan, iskumid ah, wax aan macquul ahayn oo u eg ruux. Si kastaba ha noqotee, kani kuma eka fikirka kitaabiga ah. Baybalku wuxuu tilmaamayaa in soo sarakicistu ay noqon doonto jir ahaan. Si kastaba ha noqotee, jirku kuma ekaanayo jidhka aan ku fahanno ereygan.
Fikraddayada jidh ahaaneed (ama sidoo kale jir ahaaneed) waxay kuxirantahay afarta dhinac oo aan u aragno xaqiiq. Laakiin haddii ay dhab ahaantii jiraan dhinacyo kale oo badan, waxaan si xun ugu qaldan nahay qeexitaankeenna jidh ahaanta.
Sarakiciddiisa kadib, Ciise wuxuu lahaa jirdhid jidhka. Wuxuu awoodaa inuu wax cuno oo lugeeyo oo u muuqdo mid caadi ah. Waad taaban kartaa. Hadana wuxuu awood u lahaa inuu si ula kac ah uga gudbo cabirkeena dhabta ah isagoo si sahlan ku dhex maraya darbiyada sida Harry Potter xarunta. Waxaan u tarjumnaa tan mid aan dhab ahayn; laakiin laga yaabee inay tahay wax iska caadi ah jirku inuu la kulmi karo dhammaan muuqaalka dhabta ah.
Markaa miyaan sugi karnaa nolol weligeed ah sidii qof iskii isu garan kara, oo leh jidh dhab ah oo aan dhimaneyn, cudur iyo suuxdin, sidoo kalena aan ku xirnayn hawada, cuntada, biyaha iyo wareegga dhiigga si loo jiro? Haa, runtii waxay umuuqataa sidaas. Kitaabka Quduuska ah ayaa yidhi: "... waxa aannu noqon doonnaa weli lama muujin." Waxaan ognahay in markii la muujiyo inaan noqon doonno sidiisa oo kale; maxaa yeelay, isagaannu ku arki doonnaa isaga siduu yahay (2 Yooxanaa 3,2, Kitaabka Zurich).
Qiyaas nolol maskaxdaada iyo macnahaagu - weli waxay leedahay astaamahaaga aad iska leedahay oo kaliya waxay ka madax banaanaan doontaa waxkasta oo tayo sare leh, waxay dib-u-habeyn lahayd kala-mudnaanta waxayna markaa qorsheyn kartaa, ku riyoon kartaa oo hal-abuurnimo weligeed noqon kartaa. Bal ka fikir weligaa kaas oo aad dib ula midoobiaysid saaxiibbadiiadii hore isla markaana aad fursad u haysatid inaad wax badan ku guulaysato. Qiyaas xiriirrada lala yeesho dadka kale iyo sidoo kale Ilaah ka xor ah cabsi, xiisad, ama niyad jab. Bal ka fikir inaadan waligaa salaan wanaagsan uheyn kuwa aad jeceshahay.
Ka fog ku lug lahaanshaha cibaadada aan dhammaadka lahayn weligeed weligeed, nolosha daa'imka ah waxay umuuqataa inay tahay mala awaal wixii aan laga gudbi karin weynaanteeda. Nolosha danbe waxay ina heysaa waxbadan oo aan ka ogaan karno caqligeenna xaddidan. Mararka qaarkood, Ilaah wuxuu ina siiyaa aragti hordhac ah oo ku saabsan waxa dhabtaas ballaadhan u eg yahay. Saint Paul wuxuu u sheegay Atenians-ka suubani in Eebbe "qof walba ka fogayn ..." (Falimaha Rasuullada 17,24: 27). Cirka ayaa xaqiiqdi inooguma dhowdahay qaab la qiyaasi karo. Laakiin ma noqon karto oo keliya "waddan faraxsan, fog fog" midkoodna. Xaqiiqdii, miyaanay taasi ahayn in uu nagu hareeraysan yahay qaab aanan eray bixin karin?
Haloo male awaalkaaga in uu duudsiyo in muddo ah
Markii Ciise dhashey, malaa'igta ayaa si lama filaan ah ugu soo muuqdeen adhijirradii duurka joogay (Luukos 2,8-14). Waxay la mid ahayd sidii iyagoo waddankoodii ka soo baxaya adduunkeenna. Sow wax la mid ah ma lagu sharxay kitaabka 2 ee Boqorradii 6:17 ku dhacday addoonka Elisa ee baqdin geliyay markii si lama filaan ah u soo muuqdeen malaa'igo malaa'igo ah? Wax yar ka hor intaan la dhagxin dadkii cadhaysanaa, Stephanus wuxuu sidoo kale furay aragtiyo kala geddisan iyo dhawaqyo ka baxsan aragtida aadanaha. (Falimaha Rasuullada 7,55: 56). Haddaba Yooxanaa ma wuxuu arkay riyadii Muujintii?
Randy Alcorn wuxuu farta ku fiiqay “sida dadka indha la 'aysan u arki karin adduunka ku xeeran, inkasta oo ay jirto, dembigeenna dembiga ayaa ah inaanan awoodin inaan aragno cirka. Suura gal ma tahay in ka hor dhicitaanka, Adam iyo Xaawa ay si cad u arkeen waxa aan maanta muuqan? Miyey suurtagal tahay in boqortooyada jannada qudheeda inay naga fog tahay? (Jannada, bogga 178).
Kuwani waa fikradaha xiisaha leh. Laakiin maahan kuwo fantastik ah. Saynisyadu waxay ina tusisay in abuurku uu ka badan yahay inta aan ka garan karno xadkeenna jir ahaaneed. Nolosha adduun-weynaha ee bini-aadamka waa muujinta aad u xaddidan waxa aan ugu dambeyntii noqon doonno. Ciise wuxuu noo yimid bini-aadamka oo innaga mid ah sidaas darteedna wuxuu u soo gudbiyay xadadka jiritaanka aadanaha illaa masiirka kama dambaysta ah ee nolosha jidhka oo dhan - dhimashada! Wax yar ka hor iskutallaabta lagu qodbay, wuxuu duceeyay: "Aabe, i sii ammaanta aan adiga la lahaa intaan dunidan la abuurin!" Yaanan ilaawin inuu sii waday ducadiisa: "Aabe, waad leedahay dadka] waa la i siiyay waxaanan rabaa inay ila joogaan meesha aan joogo. Waa inay arkaan ammaantayda aad i siisay, maxaa yeelay waad jeceshahay ka hor intaan dunuunka la abuurin ” (Yooxanaa 17,5: 24 iyo, Good News Bible).
Cadowga ugu dambeeya
Balanqaadyada cirka iyo dhulka cusub waxaa ka mid ah "dhimashada weligeed waa laga adkaanayaa". Dunida horumartay, waxaan ku guuleysanay inaan ogaano sida loo noolaado toban sano ama labo ka dheer. (Nasiib darrose, ma aanan awoodi karin inaanu ogaanno sida loo isticmaalo wakhtigan dheeriga ah). Laakiin xitaa haddii ay suurtagal tahay in laga baxsado qabriga wax yar, dhimashadu weli waa cadowga aan laga maarmin.
Daraasadkiisii ​​xiisaha badnaa ee jannada, Alcorn wuxuu sharxayaa: “Ma inaannaan ammaaneyn geerida - Ciise kuma farxin. Wuxuu u ooyay geerida (Yooxanaa 11,35). Sida ay jiraan sheekooyin qurux badan oo kusaabsan dadka si nabad ah ku tagay weligood, sidoo kale waxaa jira sheekooyin sheegaayo maskaxda iyo jirkaba, jahwareer, ciir ciiraya, oo dhimashadoodu markooda ahaato mid daallan, naxdin leh, dad murugaysan. Dhimashadu way xanuunaysaa waana cadow, laakiin kuwa ku sii nool aqoonta Ciise, waa xanuunkii ugu dambeeyay iyo cadawga ugu dambeeya. (P. 451).
Sug! Way socotaa. , ,
Waxaan eegi karnaa dhinacyo aad u fog. Qiyaasida dheelitirka ayaa la ilaaliyaa oo mawduuca kama liidanno, sahaminta waxa innaga sugaya dhimashada ka dib ayaa ah aag xiiso badan oo cilmi baaris ah. Booskuna waa mawduuc. Sidaa darteed aan ku soo gabagabeeyo hadal kama dambays ah oo runtii farxad leh oo ka yimid Randy Alcorn: “Rabbigaan jecel nahay iyo saaxiibbada aan jecel nahay, wadajir ahaan waxaan u noqon doonnaa kan ugu dambeeya ee aduun cusub oo cajaa'ib leh oo sahminaya oo aan ku guuleysan karno. raadso adventures weyn. Ciise ayaa udub dhexaad u noqon doona dhammaanteed, oo hawada aan neefsan doonno farxad ayaa ka buuxsan doonta. Haddayn markaa markaa ka fikirno inayn jirin wax sii kordhin kara, waanu arki doonnaa - way arki doontaa! (P. 457).
waxaa qoray John Halford